BNZ bhangi ikozvino inotsigira Apple Kubhadhara muNew Zealand | Ndinobva mac
BNZ bhangi ikozvino inotsigira Apple Pay muNew Zealand
Mumwedzi ichangopfuura hatina kumbove nenhau dzine chekuita nekuwedzera kwepasi rose kweApple Pay, asi mumavhiki apfuura aya nhau ane chekuita neiyi tekinoroji yekubhadhara yemagetsi anga ari iwo marongero ezuva. Muchokwadi, nezuro tekinoroji iyi yakasvika nyika ina nyowani: United Arab Emirates, Finland, Denmark neSweden.
Dzimwe nhau dzakanangana neApple Pay inoenderana nenhamba yemabhangi ayo parizvino anopa iyi tekinoroji yekubhadhara. The New Zealand, iro bhanga idzva iro rakawedzerwa kunhamba yemabhangi anoenderana neApple Pay Iyo BNZ, yechipiri bhangi hombe munyika, saka Apple mutambi anokosha kwazvo mune izvi.
Parizvino, vatengi vebhangi vanofanirwa kumirira kusvika kupera kwemwedzi uno kuti vatange kuwedzera yavo BNZ bank VISA kadhi, iyo inobvumidza vese vatengi vebhangi vane iPhone 6 kana yakakwira, Apple Watch kana iPad Air 2 kubvira zvino kubhadhara zvese zvawakatenga. pasina kukosha kwekushandisa kadhi kadhi. Sekureva kwaDavid Bullock, Director weZvigadzirwa neTekinoroji paBNZ Bank:
Isu tinoziva kuti vatengi vedu vanoda chiitiko chakasarudzika chinovatendera kuti vabhadhare nekukurumidza, nyore uye zvakachengeteka pane akasiyana siyana zvigadzirwa pano, online uye kunze kwenyika. Isu tanga tichinzwa kuti vatengi vedu vanga vachikumbira sei Apple Pay uye zvinonakidza kwazvo kuti titi iri pano
Parizvino, yekudyidzana yekubhadhara system inonzi Eftpos, ndiyo yakanyanya kushandiswa zvakanyanya munyika yese. Mitero yekomisheni inobhadhariswa kutengeserana yega yega yakaderera kwazvo, saka iyo uve chimwe chezvishandiso zvinozivikanwa kwazvo zvinoshandiswa munyikaAsi nekuuya kweApple Pay, mashandisiro ayo anopfuura mukana wekudonha zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » BNZ bhangi ikozvino inotsigira Apple Pay muNew Zealand
Kupatsanurwa kweMacOS kwakakura kupfuura iwe zvaunofunga
Sei uye kupi kurodha zvekare shanduro dzeMacOS